Badalona - ịgagharị ebe kachasị ịtụnanya | Njem zuru oke
Badalona bụ obodo dị na mpaghara Barcelona. N'ezie, ọ dị naanị ihe dịka kilomita iri site na nke ikpeazụ. Otu n'ime isi obodo bụ Pont de Petroli. àkwà mmiri nke nabatara ọnọdụ pụrụ iche maka ndị njem nleta ọ bụla. Ma na mgbakwunye na ya, anyị agaghị agbaghara ọnụ ọgụgụ ọla nchara nke anyị ga-ahụ nke enwe anise ama ama.
Nke a bụ n'ihi na n'ebe dịtụ anya ga-abụ ụlọ ọrụ anise enwe, ọ bụ ezie na akpụrụ akpụ ahụ nwere ihu Darwin na karama n'aka ya, dị ka anyị si mara ya. Mgbe echiche dị na akwa ahụ na-ahapụ anyị, ọ dịghị ihe ọ bụla dịka ịga mpaghara ogige. Otu n’ime ihe ndị bụ isi bụ Can Soleil i Ca l´Arnús, yana mpaghara ihunanya, tinyere ọdọ mmiri mara mma.
N’okpuru ala, Badalona nwere ụlọ ihe ngosi nka pụrụ iche. Ọ bụ ihe kachasị dị mkpa nke Rome nke ga-ewe gị usoro ole na ole n'oge. Monlọ obibi ndị mọnk nke Gothic nke Sant Jeroni de la Murtra, bụ ihe nnọchianya ọzọ nke obodo ahụ, ebe ọ bụ na ọ nọ na ya ebe ndị Katọlik Katọlik natara Columbus mgbe ha chọpụtachara America. Obodo kachasị ochie, Dalt de la Vila na obodo Iberian nke Turó d´en Boscà, bụ akụkụ ndị ọzọ ị na-ekwesịghị ịhapụ.
N'abalị San Juan na Badalona
por Absolut Badalona eme 7 afọ .
Dịka ọ dị n'ụsọ Oké Osimiri Mediterenian dum, Badalona ga-emekwa abalị nke ...
Oge awa maka ebe a na-eli ozu nke Badalona n’ụbọchị ndị nsọ niile
por Absolut Badalona eme 8 afọ .
A dịtụ mwute ezumike na-eru nso, ma mgbe niile, a ezumike, na All Saints Day….
Ha katọrọ ọnọdụ dara ogbenye nke kreenu na agbata obi Llefià
por Absolut Badalona eme 11 afọ .
Ha na-adọ aka na ntị banyere ihe egwu dị na kredị dị n'ụfọdụ ala anaghị arụcha. Ndị ụlọ ọrụ na-ewu ihe kwụsịrị ọrụ ndị ahụ maka mmadụ atọ ...
Mmeghe nke ọdụ Badalona Pompeu Fabra
Taa, Sọnde, Julaị XNUMX, ọdụ ọhụrụ Badalona mepere ụzọ ya.Ọ bụ ...
Kenlọ Badalona nọ na njedebe
Kenlọ ụlọ ọrụ gọọmentị nwere ikike kachasị elu, nke mere na ọ na - eme mkpọsa ebe ...
The Barrio de la Móra na Badalona otu n'ime ntụ ojii nke ịgba akwụna na Barcelona
por Absolut Badalona eme 12 afọ .
Badalona bụ otu n'ime njiri ojii nke ịgba akwụna na Barcelona yana kemgbe iwu a malitere ...
por Absolut Badalona eme 13 afọ .